Ny fanirery dia niaraka tamin'ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/10/2021 22:19 | fifandraisana
Azo antoka fa efa nandre mihoatra ny indray mandeha ianao momba ilay andianteny: "Aleo mitokana toy izay miaraka amin'ny naman-dratsy". Mampalahelo fa misy olona maro izay maniry ny hanana fifandraisana poizina, hisorohana ny maha irery azy amin'ny fiainana. Ny fanirery fanta-daza miaraka dia mahazatra kokoa noho ny olona maro mety hieritreritra amin'ny voalohany.
Tsy misy zava-mitranga amin'ny tsy fananana vady satria tsara kokoa ny irery noho ny fifandraisana tsy salama, fa tsy manana ny ho avy izy io ary tsy maintsy ahomby.
1 Safidy fiainana manan-kery tanteraka ny mpitovo
2 Ny fahabangana manirery dia niaraka
3 Ny fahasimban'ny fihetseham-po amin'ny fanirery miaraka
Safidy fiainana manan-kery tanteraka ny mpitovo
Toy ny mitranga rehefa manana vady, safidy ny fiainana tokan-tena. Tsy tokony hatao ny manao fifandraisana amin'olon-kafa izay aharihary ny fitiavana amin'ny tsy fisiany ary eo antoandrovan'ny andro ny fanapoizinana. Betsaka ny mpivady ankehitriny no tsy mahomby satria tsy misy ny tena fitiavana ny fety ary ny fifandraisana dia miforona noho ny fiankinan-doha ara-pihetseham-po lehibe sy ny faniriana tsy ho irery amin'ny fiainana.
Ny fahabangana manirery dia niaraka
Ny fanirery miaraka aminao dia miteraka fahabangana lehibe ho an'ilay olona mijaly amin'izany. Azonao atao ny manana ny mpivady manakaiky ny fomba fijery ara-batana fa amin'ny ambaratonga ara-pihetseham-po dia zava-dehibe ny fahabangana. Misy andiana singa na zava-misy izay afaka manondro fa mijaly manirery ny olona miaraka amin'ny mpivady:
Tsy mihaino azy ny mpivady, izay maharary amin'ny ambangovangony.
Misy ny disinterest tanteraka ho an'ny tanjona na nofinofy mety hotanterahin'izy mivady.
Ny antoko maratra dia meloka amin'ny zava-drehetra ary tsy misy serasera raha ny famahana ireo olana samihafa mipoitra ao anatin'ny mpivady.
Ireo famantarana ireo dia manondro fa ny mpivady dia tsy ilay irina ary ny manirery miaraka voalaza etsy ambony dia mipetraka ao aminy. Tsy mendrika hijaly ny fananana vady fotsiny ary aleo irery irery. Ny fananana fifandraisana dia tokony ho raharaha roa ary tsy maintsy tafiditra tanteraka amin'ny andaniny roa.
Ny fahasimban'ny fihetseham-po amin'ny fanirery miaraka
Ny fifandraisana misy poizina dia tsy tsara ho an'iza ary dia mety hiteraka fahasimbana ara-pihetseham-po lehibe amin'ilay olona mijaly amin'izany. Ny fananana vady sy fahatsapana ho manirery dia zavatra tsy tokony havela satria ny ratra ara-pihetseham-po amin'ny toe-javatra toy izany dia tena zava-dehibe. Raha jerena izany dia tsara kokoa ny mamarana haingana ity fifandraisana ity ary manandrana manarina ny fiainana, na irery na miaraka amin'ny olona iray hafa izay mahasalama ny mpivady.
Raha fintinina dia tsy ilaina ny manana mpiara-miasa na miaraka amin'ny olona iray noho ny zava-misy tsotra mandositra ny manirery. Indraindray na eo aza ny fananana fifandraisana manokana dia mbola irery irery ilay olona. Ity no fantatra amin'ny hoe manirery miaraka ary amin'ity fifandraisana ity dia tsy misy fitiavana na fitiavana, zavatra ilaina mba hiasan'ny mpivady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny fanirery dia niaraka tamin'izy mivady
Jereo ny tolo-kevitra ririnina an'i Thinking Mu